परमेश्वरको राज्य​—भ्रष्टाचारमुक्त सरकार
लेखको भाषा cakchiquel (central) अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी मिहे मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
परमेश्वरको राज्य—भ्रष्टाचारमुक्त सरकार
“आखिर सरकारी अधिकारीहरू पनि नागरिक नै हुन्‌। त्यसैले नागरिकहरू भ्रष्ट छन्‌ भने सरकारी अधिकारीहरू त भ्रष्ट हुने नै भए।” भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु किन असम्भव छ भनी बताउँदा निकारागुआ सरकारका प्रमुख लेखा परीक्षकले माथिका शब्दहरू भनेका थिए।
अहिलेको जुनसुकै सरकार पनि मानव समाजकै भाग हो। त्यसैले यदि समाज नै भ्रष्ट छ भने सरकार पनि भ्रष्ट हुन्छ नि, होइन र? अतः कुनै सरकार मानव समाजको भाग होइन भने मात्र त्यो सरकार भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्छ। बाइबलमा त्यस्तै एउटा सरकारको विषयमा चर्चा गरिएको छ। त्यो सरकार हो: परमेश्वरको राज्य, जसबारे येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुभएको थियो।—मत्ती ६:९, १०.
परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्गबाट शासन गर्ने वास्तविक सरकार हो। भविष्यमा यसले सम्पूर्ण मानव सरकारलाई हटाउनेछ। (भजन २:८, ९; प्रकाश १६:१४; १९:१९-२१) परमेश्वरको राज्यले मानिसहरूको लागि ल्याउने थुप्रै आशिष्‌मध्ये एउटा हो: भ्रष्टाचारको अन्त। यो कुरा साँच्चै हुनेछ भनी प्रमाण दिने परमेश्वरको राज्यको छवटा पक्षबारे छलफल गरौं।
अहिलेको समस्या: मानव सरकारहरूको मुख्य आयस्रोत भनेको जनता हुन्‌। नागरिकहरूले तिर्ने कर वा महसुलबाट नै सरकारहरू चलिरहेका छन्‌। सरकारले करबाट निकै आम्दानी गरेको देख्दा केही सरकारी अधिकारीहरू पैसा हिनामिना गर्न लोभिन्छन्‌। अरू कतिपय भने कर वा महसुल छल्न मानिसहरूले दिएको घूस लिन्छन्‌। परिणामस्वरूप एउटा डरलाग्दो चक्र सुरु हुन सक्छ—मानिसहरूले कर नतिर्दा सरकारले घाटा बेहोर्नुपर्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न सरकारले अझै चर्को कर लगाउँछ। अनि यसले गर्दा भ्रष्टाचार अझै मौलाउँछ। यसो हुँदा सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्नेहरू त इमानदार मानिसहरू नै हुन्छन्‌।
समाधान: परमेश्वरको राज्यको शक्तिको स्रोत सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर यहोवा * हुनुहुन्छ। (प्रकाश ११:१५) यो राज्य चल्न कसैबाट कर लिनु आवश्यक छैन। बरु परमेश्वर “सामर्थ्यमा बलियो”, निःस्वार्थ र उदार हुनुभएकोले उहाँको राज्यले आफ्नो प्रजाको सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पूरा गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्छौं।—यशैया ४०:२६; भजन १४५:१६.
अहिलेको समस्या: अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरिएकी सुजन रोज-आकरमेन अनुसार भ्रष्टाचार निवारण गर्न “माथिल्लो तहदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ।” कुनै सरकारले भन्सार अधिकृत र प्रहरीहरूमाझ व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्न खोज्छ तर उच्च पदाधिकारीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार चाहिं सहन्छ भने नागरिकहरूले त्यो सरकारमा भरोसा गर्न छोड्छन्‌। साथै कुनै मानव शासक जत्ति नै इमानदार किन नहोऊन्‌, आखिर तिनी पनि जन्मजातै त्रुटिपूर्ण हुन्छन्‌। बाइबलले भनेझैं “संसारमा यस्तो कुनै धर्मी मानिस छैन जसले सबै काम ठीक गर्छ।”—उपदेशक ७:२०.
येशू ख्रीष्टले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घूस लिन ठाडै इन्कार गर्नुभयो
समाधान: यहोवा परमेश्वरले आफ्नो राज्यको राजा हुन येशू ख्रीष्टलाई छान्नुभएको छ र उहाँ मानिसहरूजस्तो त्रुटिपूर्ण हुनुहुन्न। उहाँलाई कहिल्यै गलत काम गर्नको लागि लोभ्याउन सकिंदैन। यो कुरालाई प्रमाणित गर्ने एउटा घटनाबारे विचार गर्नुहोस्। यस संसारको शासक सैतानले येशूलाई “संसारका सबै राज्य र त्यसको गौरव” दिन खोज्यो। बदलामा उहाँले सैतानलाई केवल एक चोटि ढोग्नुपर्ने थियो। यत्ति ठूलो घुस त सायद इतिहासमै अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन। तर येशूले त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्नुभयो। (मत्ती ४:८-१०; यूहन्ना १४:३०) जीवनका अन्तिम घडीहरूमा निकै सास्ती भोग्नुपर्दा समेत येशू इमानदार रहनुभयो। दुखाइ कम गर्ने औषधी दिइँदा उहाँले त्यो लिनुभएन। किनभने त्यस औषधीले गर्दा उहाँको होस गुम्न सक्थ्यो, तर यहोवाप्रति पूर्ण वफादार रहेको देखाउन उहाँ मृत्युसम्मै सचेत अवस्थामा रहनु आवश्यक थियो। (मत्ती २७:३४) परमेश्वरले येशूलाई पुनर्जीवित गर्नुभयो र अहिले उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको राजा हुन आफू योग्य भएको कुरा येशूले प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ।—फिलिप्पी २:८-११.
अहिलेको समस्या: थुप्रै देशमा भ्रष्ट सरकारी अधिकारीहरूलाई हटाउन सकियोस् भनेर नियमित रूपमा निर्वाचन गरिन्छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भने चुनावी अभियान र निर्वाचनको दौडान भ्रष्टाचार हुने सम्भावना अझ धेरै हुन्छ। अनि विकसित मुलुकहरूमा समेत यो समस्या व्याप्त छ। चुनावी अभियान र अरू कामको लागि नेताहरूलाई थुप्रै चन्दा दिएर धनी व्यक्तिहरूले सरकारी अधिकारीहरूको नियुक्तिमा निकै प्रभाव पार्न सक्छन्‌।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन पल स्टिभन्सले धनी व्यक्तिहरूको त्यस्तो प्रभावले गर्दा “सरकारको वैधानिकता र गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा हुन्छ र मानिसहरूको भरोसा समेत गुम्छ” भनी लेखे। त्यसैले त संसारभरिका थुप्रै मानिसहरू सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था भनेकै राजनैतिक पार्टी हो भनी मानिलिन्छन्‌।
समाधान: परमेश्वरको राज्यले शासन गर्दा चुनावी अभियान वा निर्वाचनको बेला हुने भ्रष्टाचारको सम्भावना नै रहँदैन किनभने यो स्थायी सरकार हो। (दानियल ७:१३, १४) यस राज्यको राजालाई परमेश्वरले नै छान्नुभएकोले यो सरकार मानिसहरूको भोटको आधारमा टिक्ने या नटिक्ने भन्ने हुँदैन। यो सरकार स्थायी भएको हुँदा यसले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू मानिसहरूकै चिरकालीन हितका लागि हुनेछ भनी हामी ढुक्क हुन सक्छौं।
परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्गबाट शासन गर्ने वास्तविक सरकार हो
अहिलेको समस्या: भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ-नयाँ नियम बनाएपछि भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्ला। तर विशेषज्ञहरूले पत्ता लगाए अनुसार सरकारले जत्ति धेरै नयाँ नियम बनाउँछ, मानिसहरूले भ्रष्टाचार गर्ने मौका उत्ति नै धेरै पाउँछन्‌। यति मात्र नभई भ्रष्टाचार निवारण गर्न बनाइएका नियमहरू लागू गर्न अक्सर धेरै खर्च लाग्छ तर सफलता भने थोरै मात्र प्राप्त हुन्छ।
समाधान: मानव सरकारहरूको तुलनामा परमेश्वरको राज्यको कानुन निकै उत्कृष्ट छ। उदाहरणको लागि, के-के गर्नुहुन्छ अनि के चाहिं गर्नुहुँदैन भनेर लामो सूची दिनुको साटो येशूले एउटा सिद्धान्त दिनुभयो, जसलाई अक्सर सुनौलो नियम भनिन्छ। उहाँले भन्नुभयो: “मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे जसो गरून्‌ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर्नू।” (मत्ती ७:१२) अझ उल्लेखनीय कुरा के हो भने परमेश्वरको राज्यका नियमहरूले मानिसहरूको मनसाय र कार्य दुवैलाई प्रभाव पार्छ। येशूले यसो भन्नुभयो: “तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।” (मत्ती २२:३९) मानिसहरूले यस्ता नियमहरू साँच्चै पालन गरेका छन्‌ कि छैनन्‌ भनी परमेश्वरले पक्का गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ मानिसको मन जाँच्न सक्नुहुन्छ।—१ शमूएल १६:७.
अहिलेको समस्या: लोभ र स्वार्थी चाहनाले गर्दा नै मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्न पुग्छन्‌। सरकारी अधिकारी तथा नागरिकहरू अक्सर यस्ता दुर्गुणहरू देखाउँछन्‌। अघिल्लो लेखमा सियोलको सपिङ मल भत्केको दुर्घटनाबारे चर्चा गरिएको थियो। त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले निर्माण कम्पनीबाट घूस लिएका थिए। त्यस कम्पनीलाई गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नु वा सुरक्षा नियम पालन गर्नुभन्दा घूस दिनु नै सस्तो हुन्छ भनेर थाह थियो।
त्यसैले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हो भने मानिसहरूलाई लोभ र स्वार्थजस्ता दुर्गुण त्याग्न सिकाउनु आवश्यक छ। तर यस किसिमको शिक्षा दिन मानव सरकारहरूसित न इच्छा छ, न त क्षमता नै।
समाधान: परमेश्वरको राज्यले भ्रष्टाचार हुनुको मूल कारण अर्थात्‌ लोभ र स्वार्थजस्ता दुर्गुणहरू कसरी त्याग्ने भनी मानिसहरूलाई सिकाउनेछ अनि भ्रष्टाचारलाई जरैसमेत उखेलेर फ्याँकिदिनेछ। यस्तो शिक्षाले ‘मानिसहरूको दिमागलाई नयाँ मनोभावद्वारा उत्प्रेरित’ गर्नेछ। (एफिसी ४:२३) लोभ र स्वार्थजस्ता दुर्गुणहरूलाई त्यागेर तिनीहरूले आफूसित भएका कुरामा सन्तुष्ट हुन र अरूलाई चासो देखाउन सिक्नेछन्‌।—फिलिप्पी २:४; १ तिमोथी ६:६.
अहिलेको समस्या: जतिसुकै राम्रो सामाजिक वातावरणमा हुर्केको या नैतिकतासम्बन्धी सबैभन्दा राम्रो शिक्षा पाएको भए तापनि केही मानिसहरू बेइमानी र भ्रष्टाचारको बाटो रोज्छन्‌। यही कारणले गर्दा मानव सरकारहरूले भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैनन्‌ भनी विशेषज्ञहरू बताउँछन्‌। यस सन्दर्भमा मानव सरकारले हासिल गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै भ्रष्टाचार र यसले गर्दा हुने क्षतिलाई केही हदसम्म कम गर्नु हो।
समाधान: राष्ट्र सङ्घले भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोजना गरेको अधिवेशनमा यसो भनिएको थियो: भ्रष्टाचारसित लड्न सरकारले देशका जनतालाई “इमानदार र जिम्मेवार” नागरिक बन्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। हुन त यो मानव सरकारको राम्रो लक्ष्य हो। तर परमेश्वरको राज्यले भने आफ्नो प्रजालाई यस्ता गुणहरू विकास गर्न मात्र प्रोत्साहन दिंदैन। बरु त्यस राज्यको प्रजा हुन चाहनेले यस्ता गुणहरू देखाउनै पर्छ। “लोभीहरू” र “झूट बोल्नेहरू” परमेश्वरको राज्यको हकदार हुनेछैनन्‌ भनेर बाइबलमा बताइएको छ।—१ कोरिन्थी ६:९-११; प्रकाश २१:८.
मानिसहरूले यस्ता उच्च नैतिक स्तर पालन गर्न सक्छन्‌। सुरु-सुरुका ख्रीष्टियनहरू यस कुराको प्रमाण हुन्‌। उदाहरणको लागि, सिमोन नाम गरेका एक जना चेलाले प्रेषितहरूबाट पवित्र शक्तिको वरदान किन्न खोजेका थिए। तर प्रेषितहरूले घूस लिएनन्‌ अनि सिमोनलाई यसो भने: “तिम्रो यस खराबीको लागि पश्‍चात्ताप गर।” सिमोनले आफ्नो गलत चाहनाले ल्याउने नराम्रो परिणामबारे बुझे। अनि त्यसबाट जोगिन सकियोस् भनेर आफ्नो निम्ति प्रार्थना गरिदिन तिनले तुरुन्तै प्रेषितहरूलाई आग्रह गरे।—प्रेषित ८:१८-२४.
तपाईं कसरी परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुन सक्नुहुन्छ?
तपाईं जुनसुकै देशको नागरिक भए तापनि परमेश्वरको राज्यको प्रजा बन्न सक्नुहुन्छ। (प्रेषित १०:३४, ३५) यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर थाह पाउन अहिले संसारभरि परमेश्वरको राज्यले सञ्चालन गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिनुहोस्। तपाईंलाई निश्शुल्क गृह बाइबल अध्ययन कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर देखाउन यहोवाका साक्षीहरू खुसी हुनेछन्‌। यसरी बाइबल अध्ययन गर्न तपाईंले हप्ताको १० मिनेट मात्रै दिए पनि पुग्छ। यस अध्ययनबाट तपाईंले परमेश्वरको राज्यले भ्रष्टाचारको नामोनिसान कसरी हटाउनेछ भनेर सिक्नुका साथै ‘त्यस राज्यको सुसमाचारबारे’ अझ धेरै कुरा थाह पाउनुहुनेछ। (लूका ४:४३) तपाईंको छरछिमेकका कुनै पनि यहोवाका साक्षीलाई सम्पर्क गर्न वा हाम्रो वेबसाइट jw.org/ne हेर्न हामी तपाईंलाई आग्रह गर्छौं।
के तपाईं घरमै बसेर निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ?
^ अनु. 8 बाइबलअनुसार परमेश्वरको नाम यहोवा हो।